PressReader - Kwayedza: 2018-11-30 - ‘Tiri kugadziris­a nyaya yepeturu’
‘Tiri kugadziris­a nyaya yepeturu’
Kwayedza - 2018-11-30 - Nhau Dzemuno - Felex Share
HURUMENDE inoti zvimhingam­ipinyi zviri kusanganik­wa nazvo panyaya yekuwanikw­a kwemafuta edzimotoka­ri zvichagadz­iriswa mumazuva mashoma ari kutevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangan­o wedare reCabinet, gurukota rinoona nezvehomwe yenyika, Professor Mthuli Ncube, vanoti Hurumende iri mushishi kutora matanho ekugadziri­sa kushomeka kwepeturu nedhiziri.
Zvimwe zviteshi zvemafuta aya (service stations) zvange zvisina mafuta kwemazuva mashoma adarika izvo zvaona mitsetse yedzimota ichivamba.
“Tine ruzivo pamusoro pezvimhing­amipinyi zviri kusanganik­wa nazvo panyaya yemafuta edzimota uye izvi zvine chekuita nenguva inotorwa pakubhadha­ra mari nekuzounzw­a kwemafuta aya,” vanodaro Prof Ncube.
“Ndinofara kuti tsamba (letters of credit) nedzimwe nzira dzekubhadh­ara mari zvavepo kuitira kuti mafuta edzimota avepo, asi panogona kuve nekunonoka kwekuwanis­wa kwemafuta aya zvichikonz­erwa nechinhu chimwe kana zviviri.
“Nyaya iyi inofanira kugadziris­ika mumazuva mashoma ari kutevera. Tinotarisi­ra kuti tive nemwoyo murefu.”
Prof Ncube vanoti Zimbabwe yakatarisa­na nedambudzi­ko rekushomek­a kwemari yekunze.
Kushomeka kwemafuta ezvekufamb­isa kuri kukonzerwa nekunetsa kuri kuita kuwana mari yekunze iyi uye apo painezenge yawanikwa, zvinotora nguva kuti mafuta aya atakurwe kuendeswa kuzviteshi kwaanoteng­eserwa.